Ụbọchị My Pet » Top 5 Chick ịfegharị aka Movies N'ihi Mme
N'ihi na ladies ... nke ọma, o nwere Patrick Swayze. Mkpa m na-ekwu ihe? N'ihi na ụmụ okorobịa, o nwere ihe na-akpali akụkọ akara, ejije, aghụghọ, nye, na ụfọdụ kama na-akpa ọchị Mpaghara nyere site Whoopi Goldberg. Na ogwugwu-apụghị iti! Jide n'aka na ha nwere Kleenex na aka nkụ ndị anya mmiri.
"Nke a oldie, ma goodie "atụmatụ Kevin Costner na mbubreyo Whitney Houston. Ọ na-agwa akụkọ nke a "Diva" onye ngosi nwoke onye ndụ na-egwu site na otu n'ime ya "Fans" na ekemende na-amanye ime ka a "nche" iji chebe ya. Tinye Kevin Kostner. E wezụga na ihunanya, ihe nkiri a na-ọma-e dere, savvy, na nke jupụtara edinam. M na-enye ya 5 kpakpando ntụrụndụ uru! Ị ga kwa.
Ị ga-ahụ n'anya nke na mmekọrịta na "ụmụnna" nke ọmarịcha nkedo, featuring Morris chestnut, D, L. Hughley, Bill Bellamy, na Shemar Moore. Ebe a bụ 4-1-1: anọ ndụ enyi obibi mmekọrịta ha okwu, dysfunctions, na ndụ nchoputa. Ma, ọ bụ ihe karịrị nke ahụ. Ha aka ọdịnala ezinụlọ, ebịne agbụrụ na okike dabeere stereotypes, na a dum otutu ihe. Ọ bụ na-akpa ọchị, sexy, na smart. Ma ọ bụ a oké mkparịta ụka Starter ... ma ọ bụrụ na ị na-n'ime na.
Anụ NDỊ Naa
Roger Ebert dubbed ya, "Best film nke afọ!"
Ihe nkiri a na-enye a dum ọhụrụ definition ka mmekọrịta ọnọdụ: "Ọ gbagwojuru anya."
Ọ kpakpando Halle Berry, Billy Bob Thornton, na Heath Ledger. "Naa" na-agwa akụkọ nke a ekwekọghị, iwe mkpọrọ nche nke na-aghọ idem na nwunye a onye na-n'okpuru nche-ya. Ọ bụ graphic, raw, riveting, na layered. Berry na-akpụ akpụ portrayal nke "Leticia" akwụ ya ihe Academy Award ebe a. Chọpụta ihe na "uzu" bụ ihe.
Gịnị ka ị ga-esi mgbe ị ikpokọta James Earl Jones, Diahann Carroll, isii ụmụaka, na a ọdịmma ọrụ? Ibu nke na-achị ọchị, n'anya, na-eto eto, (na ọ bụghị naanị na ụmụaka).
E wezụga na hugely ụtọ, o nwere oké music ka ijezu ka, site n'ikike nke Gladys amara dika Knight. Ị gaghị agbaghara ya!
Olee otú na-Ụbọchị-Sexy Iji gị ise enwe Uche Ziri
Akpa Atụmatụ N'ihi The ihere, Awkward Onye